Ibughari UNWTO site na Madrid rue Riyadh na-ejikọ United States of Tourism
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ibughari UNWTO site na Madrid rue Riyadh na-ejikọ United States of Tourism
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A ga-enwe echi ọhụrụ maka njem. Nke a echi ọhụrụ, ma ọ bụ ụfọdụ na-ekwu na ọhụụ ọhụrụ nwere ike ibidola. O yiri ka Saudi Arabia na-apụta dị ka onye na-eche echiche doro anya na onye ndu.
Saudi Arabia na - abia dika onye ohuru ohuru maka njem njem njem na njem nlegharị anya na - eme ka aha njirimara na ngalaba nke ndị njem na - eme njem ọnụ.
Kwaga Onye isi UNWTO site na Madrid gaa Riyadh ga-abụ nkwuwa okwu kachasị na-emetụbeghị, Saudi Arabia yiri ka ọ kpebisiri ike.
Saudi Arabia nwere ike ịnwe ohere iduga ndị njem na mpaghara nke ọzọ mgbe COVID gasịrị, N'otu oge Alaeze ahụ nwekwara ohere idozi ụfọdụ mmejọ na usoro ntuli aka UNWTO.
Njem na njem nlegharị anya nke ụwa chọrọ enyemaka maka ịlaghachi azụ. Na nhazi zuru ụwa ọnụ, ndị World njem na njem nleta Council (WTTC) na-anọchite anya ndị otu na-arụpụta ihe na ndị nwere mmetụta na njem njem nke onwe na nke ndị njem. O di nkpa ka WTTC nwee ike ikwurita okwu na ndi oru ndi mmadu. Ndị ọrụ ọha na-anọchi anya ndị UN mmekọ mmekọ, ndị Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa (UNWTO).
Ebe ọ bụ na Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvilhis weghaara oche na UNWTO, World Tourism Organisation ghọrọ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ihe nzuzo, gụnyere nkwụsị nke WTTC.
Saudi Arabia na-enweta ya. Alaeze ahụ nwere ego na mmetụta iji mee ka ihe ọhụrụ dị ọhụrụ wee dozie ọdịnihu nke njem ụwa.
China gbalịrị nke a mgbe UNWTO General Assembly na Chengdu, mgbe a tozuru Zurab n'ike. China guzobere Njikọ Njem Nleta Worldwa. Nzukọ a agbanyeghị mgbe ọ bụla.
Tourwa njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nọ na nsogbu. Azụmaahịa ọ bụla, mba ọ bụla na-alụ ọgụ maka ndụ nke ya n'oge ọrịa na-efe efe. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ebelata ọtụtụ mmefu, Saudi Arabia na-emefu ego na njem nleta dịka mba ọ bụla enweghị ike ịme: Ijeri na ijeri Dollar.
A hụla Minista njem njem Ahmed Al-Khateeb ka ọ na-agagharị ụwa n'ụdị ma soro ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya ya.
O yikarịrị ka ọ jikọrọ netwọk karịa nke ukwuu, ma saa mbara karịa onye isi odeakwụkwọ UNWTO. Ndị nnọchi anya Saudi na-abụ kpakpando mgbe niile.
N’April n’afọ a, WTTC nwere ike iwepụta nzukọ mbụ nke ụwa mgbe COVID-19 jikọtara ụwa nke njem na Cancun, Mexico.
Site na enyemaka obere site na Saudi Arabia nke HE na-anọchi anyaAhmed Al Khateeb, minista na-ahụ maka njem nleta maka Alaeze ahụ, ụfọdụ ndị nnọchianya bịara Nzukọ WTTC zuru ụwa ọnụ laghachitara na olile anya olile anya mgbe ha na onye ozi mba Saudi ahụ zutere. A kpọrọ ya kpakpando na-enwu gbaa nke njem nlegharị anya ụwa.
Izu abụọ mgbe nzukọ WTTC a gachara, onye isi oche nke WTTC na onye ọbịa nke nzuko ahụ, onye bụbu onye nlekọta njem maka Mexico, Gloria Guevara, kwupụtara, ọ ga-aga Saudi Arabia na July ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ nke onye nlekọta njem nleta nke Saudi.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye ozi Saudi jUsta goro nwanyị kacha nwee mmetụta na njem dị ka onye ndụmọdụ ya. Gloria nọ na Riyadh ugbu a na-arụ ọrụ maka gọọmentị Saudi.
Onye ozi Saudi ahụ n’oge ahụ kwuru, sị: “Anyị nwere ihe nketa mba siri ike na ọtụtụ puku akụkọ pụrụ iche a ga-agwa. Gloria na-eweta nka mba ụwa na nnukwu netwọkụ zuru ụwa ọnụ site na oge ya na-anọchi anya njem nlegharị anya ụwa na njem njem dị ka onye isi nke WTTC na ahụmịhe na-agbanwe agbanwe site na ịmalite njem njem njem site n'oge ya dịka odeakwụkwọ nke njem nleta na Mexico, nke ahụ ga-enyere anyị aka dị ka nnukwu anyị - itinye ego na njem nlegharị anya na-aga n'ọkwa ọzọ. "
Onye ozi ahụ ziri ezi. Ọ bụghị nanị Gloria nọ n'ógbè ọhụrụ ya. Emeghere mpaghara mpaghara maka WTTC dị ka onyinye site na Saudi Ministry of Tourism.
Ọzọkwa World Tourism Organisation (UNWTO) guzobere otu ụlọ ọrụ mpaghara na Riyadh, iji kwado uto nke mpaghara njem njem nke Middle East ka ọ na-agbake site na ọrịa coronavirus.
Officelọ ọrụ ahụ kpuchiri mba 13 n'ime mpaghara ahụ ma na-eje ozi dị ka ikpo okwu iji wulite ọganihu ogologo oge maka mpaghara na mmepe mmadụ na mpaghara njem na njem na mpaghara.
Ọfịs ahụ gụnyere Center Statistics Centre raara onwe ya nye bụ onye ebumnuche ya bụ ịbụ onye ndu kachasị na ọnụ ọgụgụ njegharị maka mpaghara.
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ na-eme dị ka a pụrụ ịdabere na eTurboNews isi mmalite.
Ọ na-ebugharị Tourtù Njem Nleta ismwa si Spain na Saudi Arabia.
Agencylọ ọrụ UN jikọtara anọ na Madrid, Spain kemgbe e guzobere ya na November 1, 1975. Nke a nyere Spain oche na-adịgide adịgide yana ikike ịtụ vootu na Executive Council, ngalaba na-achị isi nke World Tourism Organisation
Kwaga UNWTO na Saudi Arabia ga-abụ nnukwu nzọụkwụ na mgbanwe dị mkpa maka njem nleta ụwa. Ọ ga - enye alaeze nke Saudi Arabia ọ bụghị naanị onye ndu na ụlọ ọrụ a, mana ọ ga - adịgide adịgide na otu kansụl.
Mustdị nzọụkwụ a ga-akwadorịrị ya na General Assembly kwado maka October afọ a na Morocco. Gụọ UNWTO General Assembly Morocco: E gosipụtabeghị ihe nzuzo?
Dabere na eTurboNews isi mmalite, Gọọmentị nke Spain mere mmechuihu ma na-emegide usoro dị otú a.
Ọ dị ka ngagharị a nwere ike ịbelarị ya na Septemba 2017 na UNWTO General Assembly na Chengdu, China.
Mgbakọ UNWTO 2017
O nwere ike ịkọwa ihe kpatara Saudi Arabia ji kwado Zurab Pololikashvil na nhoputa ndi ochichi a na-enyo enyo na China, na nhoputa ndi ochichi ya na Jenụwarị afọ a maka UNWTO SG megide nwa akwukwo si Bahrain, Ọ Mai Al Khalifa .
Ma onye bụbu ode akwụkwọ ukwu UNWTO, Dr. Taleb Rifai na Francesco Frangialli megidere etu ntuli aka a siri mee. Ha dere akwụkwọ ozi na-emeghe na oku weghachite decenct na usoro ntuli aka UNWTO . Nkwado nkwado a bụ atụmatụ nke Network Njem Nleta Ụwa, nzukọ nzuzo nke nwere ndị ndu njem nleta na mba 127, ma nwee mbinye aka nke ọtụtụ ndị isi.
Onye bụbu Secretary General General UNWTO na onye isi oche WTTC na mbụ Prof. Geoffrey Lipman. Louis d'Amore, onye nchoputa na onye isi oche nke Institutelọ Ọrụ Mba Nile Maka Udo Site na Ntugharị (IIPT), na Juergen Steinmetz, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ Network Njem Nleta Ụwa bịanyere aka na aha ha iji kwado akwụkwọ ozi ahụ.
Ajụjụ nke UNWTO na-eme na njem njegharị ụwa ọtụtụ ndị ajụla n'azụ ihe nkiri ahụ.
Dabere na eTurboNews Isi mmalite, mba dị iche iche na-aga Saudi Arabia maka enyemaka.
Enwere ogige na-eto eto nke ụlọ nkwado iji kwaga UNWTO na Saudi Arabia. Alaeze ahụ abụrụla ezigbo onye ọbịa na enyi ụlọ ọrụ ahụ mgbe ọ na-agagharị n'ọtụtụ nsogbu na-agaghị ekwe omume n'ọtụtụ ọkwa.
Agbanyeghị olu ndị mmegide na-ekwu na nke a ga-enye Saudi Arabia nnukwu njikwa, ndị ọzọ na-ajụ okwu gbasara ikike mmadụ na ịha nhatanha n'alaeze ahụ.
UNWTO General Assembly ga-akwado nkwenye nke UNWTO Executive Council na Jenụwarị iji kwado Zurab Pololikashvilhis maka okwu nke abụọ.
Saudi Arabia na-emepe ụzọ iji weta ụwa nke njem ọnụ. Ọ nwere ike mezie mmejọ ụfọdụ, ma setịpụrụ ụzọ maka ọkwa ụlọ ọrụ njem nleta COVID-19 n'ọdịnihu.
eTurboNews rutere UNWTO SG Onye Ndụmọdụ Pụrụ Iche Anita Mendiratta na Marcelo Risi, Director nke Nkwukọrịta, World Tourism Organisation. Ọ dịghị nzaghachi.